Rugby – Analamanga : Mitohy ny fanomanan’ny CER ny fifidianana -
AccueilSongandinaRugby – Analamanga : Mitohy ny fanomanan’ny CER ny fifidianana
Vantany vao tafapetraka ireo mpikambana eo anivon’ny kaomision’ny fifidianana rezionaly (CER) ho an’ny ligin’Analamanga eo amin’ny taranja rugby, izay tarihin’ny filohany, Andry Rakoto, avy hatrany dia nandray ny asa aman’andraikiny ho amin’izany fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana izany izy ireo.
Raha nampahafantarina tamin’ny fomba ôfisialy ny 22 desambra lasa teo ireo olom-boatendry hisahana ny CER, dia nampahafantatra ny mombamomba ny tetiandro ho amin’izany fifidianana filohan’ny ligin’Analamanga eo amin’ny taranja rugby izany izy ireo omaly. Noho izay indrindra, dia nanambara ny filohan’ny CER, Andry Rakoto, araka ny tetiandro navoakan’izy ireo, fa manomboka anio 3 janoary hatramin’ny 13 janoary izao no fametrahana ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana ho an’ireo manam-paniriana hitantana ny ligin’Analamanga eo amin’ny taranja rugby.
Araka ny fanazavana ihany, dia misokatra ho an’ny rehetra ny firotsahan-kofidiana ho an’ireo izay mahafeno fepetra. Anisan’ny takian’ny fepetra voalohany amin’izany ny olona mahafeno 25 taona noho miakatra, eo ihany koa ireo efa nitantanana fileovana sy mpilalao na koa mpitsara. Manaraka izany, ireo olona mbola tsy nisazy mihitsy, na teo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena, na teo amin’ny tontolon’ny fiarahamonina. Eo koa ny fananan’ireo mirotsaka hofidiana mari-pahaizana Bacc fara-fahakeliny. Anisan’ny takiana ihany koa ho an’ireo kandidà hirotsaka hofidiana ny fandoavana lelavola mitentina 600.000 Ar, sns.
Ankoatra izay, ny 14 janoary izao kosa no hamoahan’ny CER ny lisitr’ireo mpifaninana ho amin’izany filohan’ny ligy izany, ary manomboka ny 15 janoary hatramin’ny 30 janoary kosa ny fampielezan-kevitra, ary ny 31 janoary no hanatanterahana ny fifidianana.
Voalaza fa tapitra na mifarana hatreo amin’ny famoahana ny voka-pifidianana ôfisialy kosa ny iraka sy ny andraikitry ny CER.